India muMiddle Ages, yaive yakaita sei uye itsika dzipi dzainochengetedza? | Absolut Kufamba
India mumakore epakati
La India muMiddle Ages Yakanga iri nguva izere nenhoroondo uye zviitiko zvinonakidza kwazvo, umo maumambo makuru, kufamba kukuru muhunyanzvi uye zvinyorwa zvakaonekwa, izvo pasina mubvunzo zvinonakidza kuenda, kunyanya kuziva kuti zvivakwa zvezvivakwa zvikuru zvenguva. , sevapupuri vekusimba kwaive nenguva ino munguva yayo nekusimba kwazvo mumazuva edu.
Joinha isu parwendo urwu kuburikidza neIndia muMiddle Ages umo matinozokuudza zvakakoshesa zvenguva iyoyo uye nemabatiro aakaita tsika yedu nanhasi.
1 Kufuridzira muIndia muMiddle Ages
2 Humambo hweMiddle Ages
2.1 Dzinza raGupta.
2.2 VaChalukias naPallavas
2.3 Iyo palas, Iyo pratiharas uye rastrakutas.
2.5 Maodzanyemba kana Delhi Sultanates
3 Mugwagwa weSilika
4 Zvimwe zvinofadza zvinochengetwa neIndia kubva kuMiddle Ages
Kufuridzira muIndia muMiddle Ages
Iyo nguva yenguva inobatanidzwa makore epakati, yaive yakakosha zvakanyanya kutsika zhinji, nekuti izvi zvakabatsira kukura kwavo uye hunhu mutsika, chikafu, mimhanzi nekutenda. India iri munzvimbo yakanakisa yenzvimbo dzeAsia, inogumira kumadokero nekuchamhembe kwakadziva kumabvazuva nePakistan, neChina neNepal kumabvazuva.
En nguva yepakati nepakati, refu pamberi pedzinza revaKristu raizivikanwa nekuve chivako chikuru chebudiriro, kuwedzera pakuve nechitendero che polyglot. ChiHindu, Icho chimwe chezvitendero zvekare-kare zvakave nekukura kukuru panguva nguva yepakati, pamusoro pekuburitsa zvivakwa zvevamwari vavo vese, semhemberero dzinounzwa mukati megore kusvika rangarira zvaunotenda, iyo pasina mubvunzo inoshamisa nzwisisa uye dzidza nezve chitendero zvakakora seizvi.
Humambo hweMiddle Ages
Uye zvakare, isina kugutsikana nechitendero chikuru icho chiri kutora chimiro chakawanda mukati meMiddle Ages, India yakaona hukuru hukuru huchipfuura pamberi payo, se:
Dzinza rekuchamhembe kweIndia, kwaive nemurume aripakati pemakore 320 kusvika 540, panguva ino hunyanzvi hweBuddhist hunosvika kuZenith, pamusoro pekusiya senhaka iyo Ajanta Cave, inoonekwa seyekutanga tembere dzeBuddhist, yeakakura yeAdamas hunyanzvi. yekutorwa senzvimbo yenyika nhaka.
Chalukia dzinza, ndivo vaive vatongi vakuru vekumaodzanyemba kwenzvimbo yeIndia, vakave nemimba inozivikanwa seyakajeka nguva yegoridhe panguva ino, mairi chivakwa cheChulakia chakabuda, chinova chimiro chechimiro chayo, kuchine zvivakwa zveizvi. imba youmambo.
Dzinza raPallavas, seChalakias, raive nekutonga kwavo munzvimbo yekumaodzanyemba kweIndia, vaive vakabatana panguva iyi, ndivo vamiriri vakuru vezvivakwa zveDravidian, izvo zvinogona kuonekwa muMahabalipuram.
Iyo palas, Iyo pratiharas uye rastrakutas.
VaPallas vanoonekwa sevamwe vevane simba muNorth India mumakore 770-810 pavakavamba Vikramshila University, yaive nzvimbo inozivikanwa yekudzidza chiBuddha muIndia.
Iwo pratiharas hurumende yavo yakagara kubva 730 kusvika 765 tsika ine zvivakwa zvakakura asi zvinosuwisa kuti vese vaive vaparara nekuda kwehondo.
Rastrakutas imba ine mukurumbira ine mabasa mazhinji ounyanzvi nezvivakwa izvo zvichiri zvakachengetedzwa, pasina kupokana tembere inozivikanwa kwazvo itemberi yeKrishneswara muRameswaram.
Imwe yetsika huru, iyo yainyanya kuwanikwa kuchamhembe nepakati peIndia, yaive nenguva inoshanduka apo kirasi yayo yakakamurwa kuita zvidimbu zvidiki, zvisaririra zvetsika yayo zvinochengetwa, pamwe nemadzinza anogona kuwanikwa.
Maodzanyemba kana Delhi Sultanates
Humambo hwakabatsirwa nevaMuslim, avo vakatanga vachidzora kuchamhembe kweIndia kuti vazopararira kumaodzanyemba, nekuda kwekubatanidzwa kwetsika pakave nekumuka kutsva kweumhizha, chitendero, tsika, kuvaka uye zvipfeko.
Munguva iyi, yakasvika pakubwinya kukuru kwetsika nesainzi senge:
Masvomhu, apa vakawana iyo nhamba 0, uye manhamba ekupedzisira.
Astronomy: vakaona kuti ivhu rinotenderera rakatenderedza akabatana, pamwe nechikonzero chekuora.
Mushonga: kugadzirira kwemishonga.
Zvinyorwa: kugadzirwa kwemitambo uye nyaya.
Senge kuti izvo zvaive zvisina kukwana, India inzvimbo yakatakurwa neakanyanya kukosha tsika tsika, kuve a inonakidza nzvimbo yenzvimbo Uye zvakakosha, panguva yeMiddle Ages India pamwe nemaArabu vakaita izvo zvinozivikanwa se "Mugwagwa weSilika " kuita chibvumirano chakasimba chekushambadzira nezvipenyu, uko kutengeserana kwakasimba neEurope neAsia kwakagadziriswa, nekuti zvese zvinonaka zvekunze zvinofungidzirwa uye zvaifungidzirwa semufaro wechokwadi, unogona kuwana mabheji ari humbowo hweizvi.
Hapana mubvunzo kuti India muMiddle Ages akararama nguva inokosha kwazvo kwavari, sezvo iri nguva yekuchinja uye kunyanya yekuchinja kubva makarekare kuenda kunyika yanhasi, sezviri pachena, tsika dzakadzika midzi munzvimbo iyi dzichiri kuchengetedzwa, saka inoonekwa seimwe yenzvimbo dzinochengetedza tsika dzayo nekuda kweizvozvo chengetedza tsika dzavo.
Zvimwe zvinofadza zvinochengetwa neIndia kubva kuMiddle Ages
Kunyangwe nemumigwagwa yayo unogona kuyemura yayo ngano inoshamisa, mukunakirwa kwayo, kunhuwa, tsika uye kuvaka. Mitambo yavo ichiri kuchengetedzwa sezvazviri "Diwali" unozivikanwa sekutanga kweGore Idzva reHindu iro rinopembererwa kubva muna Gumiguru kusvika Nyamavhuvhu 7, inova yekumwe kupemberera kukuru, uko husiku hunovhenekerwa nechiedza nekutamba mumigwagwa kuwedzera kune kushandiswa kwemoto munguva yese yekupemberera uku, pasina mubvunzo mhemberero yausingade kupotsa.
India, ari Mashiripiti nzvimbo Yakazara netsika uye nhoroondo yausingakwanise kufuratira, inogara iine zvinhu zvitsva zvinozokushamisa, nekuti tsika nemagariro ayo anoonekwa seakanaka kwazvo, pamusoro pekuve negastronomy yemakoko anodzvinyirira, iyo yakagadziriswa kupfuuridza nguva.
Kana iwe uri kufunga nezve kwekuenda uye uine mweya wakasarudzika, uchida kuziva uye kudzidza, ino kuenda ndiyo yakanaka sarudzo kune vadiki nevakuru, usatambise imwe nguva uye sarudza kushanyira ino yemashiripiti nzvimbo mukambani kana pane yako wega. Wakafungei nezve India muMiddle Ages?
Yakazara nzira kuchinyorwa: Absolut Kufamba » India mumakore epakati
Chinyakare mumhanzi wechiRussia uye zvakajairika zvipfeko zveRussia